Jarmalka: Labo sano oo xarig ah ayaa lagu helay shahaadooyin tallaalka COVID-19 oo been abuur ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Jarmalka: Labo sano oo xarig ah ayaa lagu helay shahaadooyin tallaalka COVID-19 oo been abuur ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Jarmalka: Labo sano oo xarig ah ayaa lagu helay shahaadooyin tallaalka COVID-19 oo been abuur ah.
Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka Jens Spahn ayaa ka digay "mawjad afraad" oo ah infekshannada COVID-19 ee ku sii socda jiilaalka, wuxuuna sheegay in kororka hadda jira ee tirooyinka - oo gaaray heerkoodii ugu sarreeyay toddobaadle Isniintii tan iyo bilowgii masiibada - la waday. by kuwa aan la tallaalin.
Jarmalku wuxuu diyaarinayaa sharci qabyo ah oo cusub oo lagu kordhinayo tallaabooyinka coronavirus sanadka soo socda.
Sharciga cusub ayaa ka koobnaan doona ciqaab adag oo la marsiin doono qof kasta oo lagu qabto isagoo been abuur ah waxa loogu yeero 'baasaboorka tallaalka'.
Sharciga Ilaalinta Caabuqa ee hadda jira ee Jarmalka waxa uu dhacayaa Noofambar 25, markaa sharciga cusub waxay u badan tahay in la soo bandhigo oo loo codeeyo taariikhdaas ka hor.
Sharciga Ilaalinta Caabuqa ee hadda jira ee Jarmalka waxa uu dhacayaa Noofambar 25, sharci-dejiyeyaasha waddankana waxaa lagu soo waramayaa inay diyaarinayaan sharci cusub oo lagu kordhinayo tallaabooyinka ka hortagga COVID-19 illaa 2022.
Hogaamiyayaasha siyaasada ee ka socda GermanyDawlada wadaaga ah ee loo badinayo inay diyaarisay sharci cusub oo kordhinaya talaabooyinka coronavirus ee dalka sanadka soo socda waxayna soo jeediyeen ciqaab adag, oo ay ku jirto waqtiga xabsiga, qof kasta oo been abuura COVID-19 shahaadada tallaalkas, oo loo yaqaan 'baasaboorka talaalka'.
Sharciga cusub ee sharciga ayaa ka koobnaan doona ganaax lacageed oo aad u badan iyo/ama ilaa laba sano oo xarig ah dadka lagu qabto iyagoo been abuur ah shahaadooyinka tallaalka.
Sharciga cusub waxa ay u badan tahay in la soo bandhigo oo loo codeeyo ka hor Noofambar 25 - taariikhda sharciga COVID-19 ee dalka hadda jira loo qorsheeyay inuu dhaco.
GermanyWasiirka caafimaadka ee xilka ka sii degaya Jens Spahn ayaa ka digay "mawjad afraad" oo ah infekshannada COVID-19 oo ku sii socda jiilaalka, wuxuuna sheegay in kororka hadda jira ee tirooyinka - oo gaadhay heerkoodii ugu sarreeyay toddobaadle Isniintii tan iyo bilowgii masiibada - la sii waday. oo ay wadaan kuwa aan la tallaalin.
Ka gorgortanka sharciga cusub ayaa tan iyo markii ay qabsadeen xubnaha garabka bidix ee SDP, Liberal Free Democrats iyo Greens, kuwaas oo u socday wadahadalo lagu dhisayo dowlad wadaag ah tan iyo doorashadii federaalka ee Sebtembar.
Germany Waxay ku shaqeysaa nidaam laba-heer ah oo shahaado tallaal ah si loo galo inta badan goobaha dadweynaha. Dadka la tallaalay iyo kuwa leh difaaca dabiiciga ah ee caabuqa hore ayaa la siiyaa xorriyadda ugu badan, halka kuwa caddayn kara baaritaanka taban ay saaran yihiin xannibaado adag, waxaana looga baahan yahay gobollada qaarkood inay ku jiraan waji-xidhka gudaha.
Gobollada Jarmalka qaarkood, ganacsiyadu waxay u diidi karaan gelitaanka kuwa aan la tallaalin, xitaa kuwa leh baaritaanno taban.
Booliska ayaa ku dhibtooday inay ka hortagaan ka ganacsiga been abuurka ah shahaadooyinka tan iyo markii baasaska la soo bandhigay bishii Juun, oo la sameeyay koox gaar ah oo ka saarta foorjariyada.
Nidaamka Midowga Yurub ee shahaadada dhijitaalka ah - kaas oo shahaadooyinka shaqsiga lagu sawiro laguna barbar dhigo furayaasha gaarka ah ee ay hayaan isbitaalada iyo xarumaha daryeelka caafimaadka - ayaa ka dhigaya been abuurka mid aad u adag, laakiin aan macquul aheyn.